AirTag vs Tile: midkee baa waqti yar ku qaadanaya helitaankiisa? | Wararka IPhone
AirTag vs Tile: midkee baa waqti yar ku qaadanaya helitaankiisa?
Angel Gonzalez | 08/05/2021 17:00 | Noticias, Alaabada Apple
Qalabka loogu talagalay alaabada raadraaca, canaasiirta ama walxaha maalinteenna maanta ma cusba sannadka 2021. Hase yeeshe, - AirTag, qalabka lagu xiro Apple, haddii taasi ay tahay mid ugub ah tan iyo markii la bilaabay toddobaadyo uun ka hor natiijooyinka isticmaalka ka dib aad ayey u fiican yihiin. Alaabada kale ee la mid ah AirTags waa traile brand trackers. Maalmo ka hor ayaa tijaabo la sameeyay isbarbardhigaya waqtiga ay qaadatay si loo helo shay lumay oo leh AirTag iyo Tile, sidaasna lagu hubinayo awoodda shabakadaha kala duwan iyo hufnaanta goobta. Natiijooyinka? AirTags ayaa ku guuleystey cod aqlabiyad leh, laakiin leh shahaadooyin qaarkood.
30 daqiiqo si loo helo AirTag, ku dhowaad 12 saacadood si loo helo Tile
Tijaabada waxaa lagu qaaday webka TechRadar taas oo AirTag iyo Tile Mate ah looga tagay xayndaabka 9-kii subaxnimo ee Isniinta meel mashquul badan. Ka dib markii uu ku soo laabtay guriga oo uu dhaqaajiyay qaabka lumay ee labada qalab, wuxuu bilaabay imtixaanka. Daaran kaliya 30 daqiiqo ogeysiin ayaa laga helay iPhone-ka ogaanshaha meesha AirTag lumay. Imtixaanka oo dhan, ilaa 13 ogeysiis lagu ogaanayo qalabka ayaa la helay.
Dhammaan macluumaadka ku saabsan AirTags, qalabka wax lagu ogaado ee Apple
Si kastaba ha noqotee, digniintii ugu horreysay ee Tile Mate ayaa timid ka dib 12 saacadood laga bilaabo bilawga baaritaanka. Taasi waa sababta tayada shabakadda raadinta ee Apple ay uga xoog badan tahay uguna adag tahay Tile. Xaqiiqdii, shabakadu waa inay horumariso oo kaliya maadaama ay lagama maarmaan tahay in la helo macruufka 14.5 si loo helo AirTags iyo heerka korsashada noocani waa tagi doonaa ku jira crescendo Toddobaadyada soo socda.
Laakiin wax walba maahan dahab dhalaalaya. Hadaan falanqeyno ogaanshaha goobta gaarka ah ee qalabka raadraaca, AirTag wuxuu ku yaalay meel fog meel waddo la mid ah tii ay dhab ahaan ku taallay. Marka loo barbardhigo Tile Mate taas oo go'aamisay goobta si ka sii saxsan. Wixii Apple tani maahan mid ku habboon tan iyo Qalabka U1 oo leh tiknoolajiyad heer sare ah Waxay yareyn doontaa mitirrada qaladka marka aad bilowdo inaad ka raadsato meel u dhow qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » AirTag vs Tile: midkee baa waqti yar ku qaadanaya helitaankiisa?
Kensington StudioDock ayaan la jaan qaadi karin iPad-ka cusub ee 12,9-inji ah
Waxay umuuqataa inay jiraan cilado qaar si looga helo Apple Music ka HomePod oo la cusbooneysiiyay nooca 14.5